Ngaba uyayidinga ifowuni eyi-5g okwangoku?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyayidinga ifowuni ye5G ngoku?
Ngaba uyayidinga ifowuni ye5G ngoku?
Hayi, i-median 5G isantya senethiwekhi sinokuthelekiswa ne-4G ngoku, kwaye ukugubungela kubi kakhulu; ungayicima loo 'fowuni ye-5G' yokuphucula i-2022.
Ngeefowuni ezingaphantsi kweedola ezingama-300 ezifana nezintsha Galaxy A32 esiyijongileyo , Umbuzo wabathengi abatsha ukuba bayayifuna na ifowuni ye-5G okanye hayi, banikwe Imeko yeVerizon, T-Mobile, okanye iinethiwekhi ze-AT & T 5G ukukhutshwa ukuza kuthi ga ngoku, kuya kusiba ngokuqhubekayo.
Kulabo baziva belahliwe, nangona kunjalo, kwaye bayazibuza ukuba bafuna ukuphucula i-ol '4G LTE yefowuni yabo kwenye into yanamhlanje, impendulo ilula kakhulu: ayisiyiyo kwaphela. Ngoba? Ewe, masijonge ezinye iinombolo.
I-5G vs 4G amaxabiso efowuni
Hayi, ayisiyiyo loo nto kwakhona, kwaye jonga enye kuthi Eyona fowuni ibhajethi ye-5G Ukujikeleza kuya kukuxelela ukuba kutheni. Nge-Galaxy A32 5G ukuba $ 282 ngaphezulu kwi-Samsung , nge-799 $ 12 ye-iPhone, yonke indlela eya kwi-1199 yeedola ye-S21 Ultra, amaxabiso efowuni ye-5G ayiseyiyo into yokulinganisa ukhetho lwakho ngokuchasene ne-2021.
I-Samsung Galaxy Z Fold 2
$ 179999 Thenga kwi-Samsung
I-Samsung Galaxy S21 Ultra
$ 119999 Thenga kwi-Samsung
$ 69999 Thenga kwi-Samsung
I-Samsung Galaxy A32
$ 282Thenga kwi-Samsung
I-T-Mobile, iVerizon, kunye ne-AT & T 5G yokugubungela inethiwekhi
Ngaba lo ngumbuzo okhohlisayo? I-T-Mobile ekucingelwa ukuba inayo Eyona ntanethi yenethiwekhi ye-5G phakathi kweziphathamandla ezintathu ezinkulu zaseMelika , kodwa loo nto ayithethi nto kangako, inikezwe ngokuba ubukhulu bayo buxhomekeke ikakhulu kwi-low-band 'Extension Range 5G' yeembonakalo zenzuzo yomsebenzisi ongaphezulu kwe-4G LTE ethandabuzekayo. Eyona nto ikhawulezayo kakhulu 'ye-Ultra Capacity 5G' phakathi- kunye neebhendi eziphezulu ziya kuthunyelwa ngokupheleleyo kubantu abazizigidi ezingama-200 ngo-2022, ke akukho sidingo sokukhathazeka malunga nokuphuculwa kwefowuni ye-5G kwi-T-Mobile ngaphambi koko.
I-T-Mobile kunye ne-apos; eyona ilungileyo kwi-US '5G yokugubungela ixhomekeke kwisantya esisezantsi sebhendi
Izinto ezibizwa ngokuba 'yiLizwe lonke le-5G' zenethiwekhi ze-AT & T kunye neBig Red zinogubungela oluncinci ngaphandle kweendawo ezinkulu zedolophu, kwaye oko kuyinyani ngakumbi kwimeko yesiphatho esikhulu sineyona nyathelo ilungileyo ye-LTE-iVerizon. Inethiwekhi yayo ye-4G LTE, nangona kunjalo, ayinakuthelekiswa nanto xa kufikwa kumba wokugubungela kunye nokuthembeka, ke ifowuni yakho ye-4G iya kuyenzela ikamva elibonakalayo apha.
I-Verizon & apos 's' kwilizwe lonke i-5G 'isembalwa kwaye iphakathi, kodwa inethiwekhi yayo ye-4G ithatha ikhekhe yenethiwekhi yase-US ngesantya esifanayo
I-AT & T ikwahlulahlula i-5G ukuya kwi-'Globalwide 5G 'yeebhendi ezisezantsi kunye' ne-5G + 'yeendawo eziphakathi ezikhawulezayo kunye nokuphakama. Ifuna ukubetha injongo ye-C-band 5G yokufikelela kwi-100 + yezigidi zaseMelika ngaxa lithile 'ekuqaleni kuka-2023.' Kude kube lelo xesha ... uqikelele ... ezantsi nezicothayo kwilizwe liphela zilawula ukugubungela i-5G yangoku exeliweyo ngengubo ngaphezulu kwezigidi ezingama-230 zabantu.
I-AT & T & apos; s kwilizwe liphela i-5G yokugubungela ikwiibhendi ezisezantsi kwaye zigxile kwiindawo ezinkulu zedolophu, njengabanye
I-T-Mobile, iVerizon, kunye ne-AT & T 5G isantya senethiwekhi
Kwakhona hayi. Olona ncedo lukhulu lwenethiwekhi ye-5G yomsebenzisi wokugqibela ngalo mzuzu uvelisa isantya esinokuthelekiswa okanye esihlala sibi kakhulu kuneso senziwe ziinethiwekhi ezine ze-4G LTE zaseMelika kunye neapos;
Ngelixa iVerizon, T-Mobile kunye ne-AT & T zonke ziphumelele iimvavanyo 'ezikhawulezayo zenethiwekhi' kulo nyaka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokulinganisa izinto ezahlukeneyo, inyani yento kukuba isantya sokukhuphela i5G e-US sithathwe sisonke asiyonto yokubhala ekhaya Malunga nokuthelekiswa kwesantya se-4G LTE, ngelixa uthungelwano 'oludala' lusabonelela ngogqatso oluphezulu kunye nokuthembeka.
Ekugqibeleni, I-T-Mobile kunye neeapos umndilili we-5G isantya yayiyi-58Mbps -ngethuba ngobuchwephesha bezona zikhawulezayo esizweni, azikho kwaye azithandeki xa kuthelekiswa nenyaniso Isantya sokukhuphela esiphakathi kwinethiwekhi ye-4G LTE , Kwaye akufuneki silibale ukuba ezo zibandakanya uninzi lokugubungela emaphandleni. Oku I-4G vs 5G ibalekisa isifinyezo kwiVerizon & apos; s budding n48 band spectrum ikuxelela konke odinga ukukwazi malunga nemeko yangoku yemicimbi yenethiwekhi ye-5G, kwaye zeziphi & iiapos ezishiyekileyo ukuba ziqwalaselwe kukugubungela inethiwekhi ye4G LTE.
I-Verizon & apos; i-CBRS 4G vs 5G Ultrawide Band vs 5G DSS isantya setekhnoloji yenethiwekhi (umfanekiso ngePCMag.com)
Ayisixabisi kangako idreyini eyongezelelweyo kwibhetri ngelixa uzama ukunxibelelana nenethiwekhi ye5G ngoku, ingaba kunjalo? Ngaphandle kwexesha le-2022-2023, ezo zigutyungelwe yinethiwekhi 'ye-Ultra Capacity 5G' ziya kubona ukonyuka kwesantya esiphakathi ukuya kwi-400Mbps, itsho iT-Mobile, okanye malunga noko iVerizon ikwazi ukukhupha ukuphuma kwayo kwe-4G CBRS ngoku, ke Sukuba nexhala ukuba ifowuni yakho ayenzi mfanekiso weflash we5G okwangoku.
I-T-Mobile kunye neapos; inethiwekhi ekhawulezayo ye5G iya kusetyenziswa ngokupheleleyo ngo-2023, kwaye iphambi kwephakeji
Oko akuthethi ukuba inethiwekhi ezukileyo yexesha elizayo ayisiyiyo kwikona, ixesha apho iimoto kunye neefriji, iifowuni kunye namaqonga ayinyani, ziya kuthi zonke zixhomekeke kumnatha omnye we-5G ngomthamo ongenakuthelekiswa nanto. Umbuzo, nangona kunjalo, ngowokuba uyayidinga ifowuni ye-5G ngoku, kwaye impendulo ithi 'nah, kodwa mhlawumbi ngo-2022.' Okanye 2023. Ucinga ntoni?
Ewe HayiIziphumo zeVoti yokujongaEwe 17.62% Hayi 82.38% Iivoti 596
i-zte blade ebonakalayo a3 prime
Utshintsha njani isindululi kwi-s5
I-Samsung Galaxy S7 Edge vs LG G4: jonga kuqala
I-Google Pixel vs Apple iPhone 7
Iimpendulo zeSamsung kwiGlass S4 izityholo zokugcina, ithi iya kufumana ikhadi le-MicroSD
I-Verizon, i-AT & T, kunye ne-US Cellular bafumana i-4G LTE yenethiwekhi yokunyusa ngexesha lesifo se-coronavirus
Ukuthelekisa isantya kwe-iPhone 6 vs Samsung Galaxy S5: yeyiphi ekhawulezayo?
Ungalongeza njani usuku lokuzalwa kwiKhalenda kaGoogle
Urhwebo kwi-Apple Watch yakho endala kwi-Apple kwaye ufumane ukuya kuthi ga kwi-175 yeedola kwityala
Fumana imowudi emnyama kuhlelo lokusebenza lweChannel lwe-Android ngokulandela ezi ndlela zilula